1939 (Septemba 1): A mụrụ Tela Tella na Abeokuta, isi obodo Ogun State na ndịda ọdịda anyanwụ Nigeria.
1962 (August 15): A mụrụ Samsindeen Saka na Ijebu-Ode, obodo dị na Ogun State na ndịda ọdịda anyanwụ Nigeria.
1971: Tela Tella natara "oku sitere n'aka" Chineke.
1976 (Eprel 18): Tela Tella zara “oku Chukwu” sitere na Chukwu ka o mee ka uche Ya mezuo n’uwa site na ịtọbe Ifeoluwa, Yoruba maka “uche Chukwu,” na Agege: bụ ógbè ndị mmadụ bijupụtara na isi obodo Nigeria bụbu Lagos.
1985: N'ịtụgharị uche na mmụọ nsọ Chineke, Tella wepụtara okwu ahụ bụ "Chrislam" maka ozi ya.
1989: Samsindeen Saka natara "oku sitere n'aka" Chineke site na njem njem ya na Mecca.
1990 (February 28): Samsindeen Saka zara “oku Chukwu” site na Chukwu site na iguzobe ọgbakọ Chrislam ya, Oketude, na Ogudu: agbata obi dị na mpụga Lagos.
N'oge okwuchukwu, Tela Tella, onye guzobere otu onye otu Nigeria Chrislam, Ifeoluwa, kwupụtara na "Moses bụ Jizọs, Jizọs bụ Muhammad. Udo diri ha nile; anyị hụrụ ha niile n'anya. ” Otu onye n'ime ụmụazụ ya, onye kpọrọ onwe ya “Chrislamist,” kwuru na “can'tbụghị Onye Kraịst ma ịbụghị onye Alakụba, na ịgaghị abụ onye Alakụba na-abụghị onye Kraịst.” Okwu ndị a na-egosi nke ọma ndabere nke Chrislam, ọtụtụ usoro mmegharị okpukpe pụtara na Naijiria bụbu isi obodo Lagos na ngwụsị afọ ndị 1970, oge ntughari okpukpe nke metụtara agwakọta nkwenkwe na omume ndị Alakụba.
Chrislam kacha ochie tọrọ ntọala na Lagos na 1976 site na onye Yoruba (agbụrụ abụọ kachasị ukwuu na Nigeria) aha ya bụ Tela Tella. Iji gbochie ebubo ịkwado Ndị Kraịst karịa ndị Alakụba ma ọ bụ nke ọzọ, Tella jụrụ ikwu banyere okpukpe ya. E kpughere aha ahụ bụ́ Ifeoluwa, Yoruba maka “Uche nke Chineke” ma ọ bụ “Lovehụ Chineke n'anya”. Mgbe o nyesịrị mkpughe ahụ, ọ tụgharịrị uche maka ụbọchị iri abụọ na otu ebe ọ mechara wulite ozi ahụ. Na mgbakwunye na Ifeoluwa, Tella na-ezo aka n'ozi ya dị ka "Chrislam," okwu nke o chepụtara iji mepụta mmata banyere ịdị n'otu n'etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba. Dika Islam, Ifeoluwa dabere na ogidi ise, ya na ihunanya buru onye mbu (Ndi ozo bu: obi ebere, obi uto, ezi omume na eziokwu). Tella na-ahuta onwe ya dika onye Chineke huru n'anya n’ime mmadu, onye ahurula “ime ka uwa nile mara”:
Abụ m uche Chukwu nke ahaziri m. Okwu Chineke bụ Jizọs. Ugbo nke ozim bu ihunanya, udo na idi. Followersmụazụ m na-agbaso iwu, usoro na ụkpụrụ nke Ifeoluwa. Abụ m ihe dị n'aka Chineke.
Dabere na Tella kwuru, Chineke na-agwa ya okwu site na mkpughe nke Chineke, nke ọ na-ezite na glossolalia. Ruo mgbe ụwa dị njikere ịnabata mkpughe ndị a, Tella na ndụ ya na ndị nwunye ya abụọ (Ndị-otu nwanyị) na ụmụ ha (Ndị-agha Ekpere) nọ n’elu Ugwu Ike, nke bụ ogige ọcha na Agege, bụ ebe ndị mmadụ bijupụtara. mpaghara dị na Lagos. Ugwu a nwere ugwu di nma banyere ugwu Sainai n’Ijipt, ebe dika ọdịnala ndi Christian na nke ndi Ju si di, Moses natara Iwu Iri. Na mgbidi ahụ ogige mechiri emechi, a na-ahụ ihe nnọchianya nke Ifeoluwa; mbugo (nke dị ka nke ahụ emere n'ụlọ akwụkwọ nke Kur'anụ, ụmụ akwụkwọ mụta ide Arabic) were obe nke Ndị Kraịst n'etiti, na obi na-egosi ịhụnanya. [Foto dị na aka nri]
Dịka Tella, Samsindeen Saka guzobere mmegharị Chrislam ya mgbe ọ nwesịrị mkpughe sitere n'aka Chineke. Saka, onye amụrụ na ezinụlọ ndị Alakụba, merela njem na Maska ugboro anọ. N’ime njem nke abụọ ya na 1989, ọ natara ihe ọ kpọrọ “ọkpụkpọ Chukwu.”
Mgbe m na-aga njem uka na Mecca ma zuru ike na nso Ka'aba [akụkụ kachasị nsọ na Islam], Chineke gosiri m na foto nrọ nke ekweghị okpukperechi na Nigeria. O kenyere m ikenye nghọtahie dị n'etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba… Nke a bụ etu o si malite.
Kpọ oku ya gbara Saka ume ịhapụ azụmahịa ya na-aga n'ihu na mkpịsị ahịhịa, hapụ nwunye ya ise, ma guzobe ozi nke Chrislam. N'ịgbaso nzọụkwụ nna ya, bụ onye ama ama na akụkọ ọdịbendị, Saka nwetaara onwe ya aha dị ka onye na-ahụkarị ahịhịa na 1970s. Site na ego o nwetara dika ndi nkuzi ahihia, o zụtara ala na Ogudu (Lagos), ebe ya mepere ebe ofufe ya na 1990. Site na mpụga, ebe ofufe dị ka ụlọ ụka, mana, ya na ogidi ya, ime ya na-adị ka ụlọ alakụba. Dịka ụlọ alakụba, ndị ọbịa na-agbado mmiri (wudu) ma wepụ akpụkpọ ụkwụ ha tupu ha abanye, e nwekwara ebe iche iche maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Ihe osise dị n'etiti otu puku na narị ise, ma ọ bụ Saka kwenyere na o nwere ụmụazụ 1,500.
Mgbe ọ ka bụ omenkà, Saka nwere ihe nkiri na Lagos Television n’etiti 1980s. Ọtụtụ n'ime ndị otu Kristi na ndị Alakụba maara ya site na televishọn sonyere na ozi Chrisham ya. Na mbido, Saka chọrọ ịdebanye aha ya na "Chrislamherb," ​​okwu e dere ede na-egosipụta ngwakọta nke Iso Christianityzọ Kraịst, Alakụba, na okpukpe ọdịnala nke kwenyere na ike nke ahịhịa maka ebumnuche ọgwụgwọ. Agbanyeghị, gọọmentị akwadoghị aha a, nke Saka, mgbe ọ nwesịrị mmụọ abalị mgbe ọ nọrọ n'ọhụụ ruo ụbọchị asaa, gbanwere Oke Tude, nke dị na Yoruba nke pụtara "Mountain of Loosing Bondage," aha nke gbanwere nke Okwu Pentikọst. Dika ulo uka Pentikost, echiche di n’uche Oke Tude bu na ike nke ndi n’ejighari ha na ekwenye ekwenye ekwenye na oganihu nke ndi n’eto ofufe na ndu. Site na ibu onu na isonye na mmemme a na-akpọ Tude ma ọ bụ “nnapụta,” a kwenyere na enwere ike ịnapụta ha n'aka ndị mmụọ ọjọọ ndị a. A na-egosipụta mgbapụta, nke a jikọtara site na mmụọ nsọ, site na ezi ahụike na akụ na ụba.
Ma Tella na Saka na-ekwusa na ịdị n'otu nke ndị Alakụba na Ndị Kraịst, n'ịhụnanya, ịdị n'otu, na udo bụ ebe ha na-elebara anya. Agbanyeghị, Ifeoluwa na Oke Tude anọghị na Nigeria Inter-Religion Council (NIREC), nke hiwere na 2000 ebumnuche nke ịkwalite nghọta dị ukwuu n'etiti Ndị Kraịst na ndị Alakụba Nigeria. Dị ka onye isi NIREC si kwuo, Chrislam enweghị ebumnuche NIREC nke ịtọ ntọala maka nkwenye okpukpe.
Kama idobe Chrislam megide nsogbu nke ime ihe ike okpukpe na-akpa Naịjirịa, ọ dị mkpa ka a kọwaa Ifeoluwa na Oke Tude na ọnọdụ mgbanwe ndụ na Lagos. Anthropologists Brian Larkin na Birgit Meyer na-akọwa ike Pentikọstal Christian na ndị ndozigharị Muslim na West Africa site n'ikike ha ịnye “netwọkụ na ihe mgbochi ndị na-eme ka ndị mmadụ nwee nkata ịtụle ihe onwunwe nke ibi n'oge akụ na ụba edoghị anya” (2006: 307). N’uzo yiri nke a, enwere ike ịkọwa arịrịọ Chrislam site n’ikizi ya imeziwanye ọdịmma nke enweghị ntụkwasị obi nke a na-ebi kwa ụbọchị na Lagos, megacity mejupụtara ọnụ ọgụgụ mmadụ karịrị 20,000,000 ebe otu n’ime mmadụ abụọ nọ n’okpuru usoro ịda ogbenye (Human Development Report 2006 ). Onu ogugu ndi mmadu nke Lagos na usoro mmepe obodo na-eme ngwa ngwa na-enye aka na ndu nke ogba aghara ma na-emebi emebi, ebe nlanariri na-adabere n’ichegodi na ihe ojoo. N'ọnọdụ dị otú ahụ nke ejighi ntụkwasị obi na ntụkwasị obi, a dịghị ele Chrislam anya dị ka ihe na-emegide onwe ya kama ọ bụ ọmụmaatụ nke ndị Lagosia, ndị, site na itinye nkwenkwe na omume Ndị Kraịst na nke ndị Alakụba, na-agbakọta ike site na ọdịnala okpukpe na ịchọ ihe ike na akụnụba. .
Na mgbakwunye na ihe mepere emepe, enwere ike ịtụle Chrislam bụ ihe mmegharị ndị Yoruba: ọ bụ agbụrụ na-emekọrịta ihe na-eme ka agwakọta n'etiti Iso andzọ Kraịst na Alakụba, yana nke a nabatara Onye ọkà mmụta sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị David Laitin kọwara ọnọdụ ahụ kpọmkwem na ndịda ọdịda anyanwụ Nigeria, mpaghara a na-akpọ Yorubaland, dị ka ndị a: "Alakụba Muslim na Ndị Kraịst Yorubas na-ahụ onwe ha dị ka ọdịbendị dị ka Yorubas kama ịbụ ndị Alakụba ma ọ bụ Ndị Kraịst" (1986: 97). Na ndị Yoruba tinyekwuru uru na agbụrụ niile karịa ihe metụtara okpukpe na-akọwa “enweghị nkwado nke ọdịiche okpukperechi” (1986: 97).
Ifeoluwa na Oke Tude abụghị n'ezie mmegharị na Yorubaland na-agwakọta Iso andzọ Kraịst na Alakụba. Mana ihe dịkarịsịrị ọhụrụ banyere Ifelowa na Oke Tude bụ nnabata ha na-eme nke Ndị Kraịst na ndị Alakụba, dị ka esi gosipụta ya na aha ha dabara na ya bụ Chrislam. N’agbanyeghi uche ha n’otu gbasara okpukperechi, odi ihe ijuanya na enwere nmekorita n’etiti Ifeoluwa na Oke Tude. N'ụzọ ụfọdụ, ọdịiche na nnabata na-arụ ọrụ n'akụkụ a.
E hiwere òtù Chrislam na nkwenkwe na “Iso Christianityzọ Kraịst na Alakụba bụ otu.” Iji maa atụ, onye otu Ifeoluwa raara onwe ya nye zara ajụjụ a banyere ma ò fere Jizọs dịka nwa nke Chukwu (dịka o siri dị na Iso Christianityzọ Kraịst) ka ọ bụ onye amụma (dịka na Islam) na “ọ bụ ha abụọ.” N'ịkọwapụta myirịta ha, Tella kwusara, sị: “Jizọs Kraịst dị n'akụkụ aka nri m, Onye Amụma Muhammad dị n'akụkụ aka ekpe m; ha bụ ezigbo ndị enyi m abụọ. ” Ọ bụ ezie na Tella na Saka tinyere Iso Christianityzọ Kraịst na Alakụba n'otu ụzọ dị ka ọdịnala amụma, ihe kachasi dị mkpa na Islam bụ tawhid, nke na-ekwu na Chineke bụ Otu. Islamickpụrụ Okpukpe Alakụba na Chineke bụ enweghị enyemaka dị iche na nkuzi Ndị Kraịst nke Atọ n'Ime Otu. Kaosinadị, ndị otu Ifeoluwa na Oke Tude elechaghị anya na nke a dị na nkwenkwe ndị a n'ihi na ha etinyeghị echiche na-enweghị isi na mkpa otu okpukperechi. N’ihi ya, ha echeghị mkpa ọ dị ịhapụ okwukwe nke amụrụ ha na ya mgbe ha sonyere Chrislam. N’ihi na a hụrụ Iso Christianityzọ Kraịst na Alakụba dị ka nkwado na inyerịta nkwado kama imegiderịta onwe ha, Ifeoluwa na Oke Tude na-agbadokarị ntụkwasị obi nye ọdịnala okpukpe nke amụrụ ha (n’ọtụtụ oge Islam), ebe ha na-eji ma na-emekọrịta omenala okpukpe ọzọ. (na ngbasa ozi Kraist). Nkwuwa okwu a na otutu ihe abughi nani ihe iji mee ka ndi mmadu bia Chrislam; ọ na - akọwa ihe kpatara na onye otu Chrislam na - esoghị usoro ntụgharị aka dịka mmeko baptism ma obu oriri udo.
N’agwa usoro idozi nke okpukpe na “nkwenye,” ndị otu Ifeoluwa na Oke Tude nwere ikike ịkwanye oke na omume okpukpere na enyere ha aka ịche ọgụ maka ndụ kwa ụbọchị na Lagos. N'ihi nkwanye ugwu ya na orthopraxy (omume okpukpe ziri ezi), Chrislam na-enye ohere maka ịgwakọta okpukpe karịa ka usoro Ọtọdọks nke Iso andzọ Kraịst na Alakụba kwere. N'ịgbaso nghọta a na-ahụkarị nke okpukpe dị ka ozizi a na-ahụkarị, Tella kwuru, sị: “Ozizi nkịta adịghị amasị m.” Saka gara n'ihu ịkọwa Oke Tude na usoro nke "okpukpe bara uru," na-enye ndị otu ngwaọrụ 'nnapụta ozugbo':
Ndi mmadu biara ebe a ibuso onye iro ha agha. Onye iro ha bụ ọrịa, agị amụ, ọnwụ, ịda ogbenye, ndakpọ olileanya, obi nkoropụ, ọdịda, iru uju. Anyị na-akụziri ha otu esi ekpegara Chineke, Abraham, Moses, Jizọs, na Muhammad ozi iji merie onye iro ha. Ekpere bu isi ihe na-eweta oganihu.
Iji mee ka ndị ọgbakọ ya nwee ihe ịga nke ọma, Saka ebipụtala ọtụtụ akwụkwọ akụkọ okpukpe na akwụkwọ nwere aha na-eche n'echiche dịka Isi Ihe Na-enye Obi .tọ, Ọganiihu taa bụ nkem, na Isi okwu nke ekpere: Vitamin nke ime mmụọ gi na Ezi Ozi: myiri na Bible na kor'an, nke a na-ere n’ahịa Oke Tude.
N'ịkọwapụta na ozizi pragmatism karịrị ozizi na Chrislam, otu onye ụkọchukwu Saka, onye kọwara onwe ya dị ka alfa-pastọ (alfa bụ okwu ndị Yoruba maka ụkọchukwu Alakụba), kwuru, sị: “Chineke enweghị okwukwe n'okwukwe anyị; Nye ya, enweghị ihe o mere ma anyị bụ Ndị Kraịst ma ọ bụ ndị Alakụba. Ihe niile gbasara Ya bụ ihe anyị onwe anyị do ya na okpukpe anyị. ” Ebe okpukpere bụ maka Chrislamists ọ bụghị ihe nkwenkwe kamakwa banyere ihe ndị dị mma, agwakọta ihe dị iche iche, ma na-emegiderịta onwe ha, ihe ndị metụtara okpukpe ka ọ bụrụhaala na ọ na-enyere ha aka ibi ndụ bara uru karị.
Ebe nkwenkwe nkwenkwe Ndị Kraịst na nke Alakụba tinyekwuru ike na nzọpụta na ndụ mgbe a nwụsịrị, Chrislam kwere nkwa ibi ndụ ka mma n'ụwa. Nkwenye izugbe n'etiti ndị otu Ifeoluwa na Oke Tude bụ na Chineke (akpọrọ 'Chineke dị ndụ' na okwu Chrislam) adịghị ndụ na arụ ọrụ na ndụ ha, ma nwee nchegbu banyere idozi nsogbu ha. N'ihi na Chineke kwenyere na ọ bụghị onye nọ n'ime obodo mana onye (“onye hụrụ n'anya” n'okwu Tella) onye nwere ike ịgwa ya okwu site na ekpere, ndị na-esote Ifeoluwa na Oke Tude nwere ike imetụta Ya site na omume ha.
Tella nwere obere ọgbakọ, nke ihe dị ka ndị na-eso ụzọ iri ise, nwere nzukọ, na-ezukọ na Satọde ọ bụla, ọ bụghị na ụlọ alakụba ma ọ bụ na chọọchị kama ọ bụ n'ụlọ nsọ:
I achọghị m ịdabere na Fraịde ebe ọ bụ na Fraịdee bụ maka ndị Alakụba, achọghị m ịdabere na Sọnde ebe ọ bụ na Sọnde bụ maka Ndị Kraịst. Ya mere anyị na-ezukọ na Satọde, nke bụ ụbọchị izu ike. N'afọ ndị gara aga, ọrụ weere ọnọdụ na Fraịde na Sọnde mana n'ihi na ndị mmadụ boro m ebubo na m na-eme n'okpukpe m, m kpebiri ịga Satọdee… Ifeoluwa pụrụ iche. Ahụrụ m Jizọs n'anya karịa Onye-amụma ahụ. Ahụrụ m ha niile n'anya, ha hụkwara m n'anya.
Ọrụ ụbọchị Satọde bidoro site na ịbụ abụ nke Ifeoluwa, bụ nke edere na akwụkwọ atọ. Dabere na Tella kwuru, abụ ndị a bịakwutere ya site na mkpughe nke Chineke: "Bach ma ọ bụ Beethoven enweghị ike ịde abụ nke Ifeoluwa - ọ bụ Chukwu dere ha."
Ndi eji egwu a bu ndi ilu Afrika, ihe eji akpo ilu ndi Western na keyboard. Mgbe abụ nke Jehova gasịrị Ifeoluwa abu, a na-agu ihe ndi ozo:
Ekwere m na Chukwu Pụrụ Ime Ihe Niile
Ekwere m na Jizọs Kraịst
Ekwere m na ndị ozi nile nke Chineke
Ekwere m na mmụọ nsọ
Ekwere m na ụbọchị mbilite n’ọnwụ
Ekwere m na Ifeoluwa iwu-Ya
Ka Chukwu nyere m aka ime uche Ya
Mgbe ahụ Tella na ndị na-eso ụzọ ya, bụ ndị jidere kandụl na-ere ọkụ na mgbịrịgba iji kpọọ ndị mmụọ ozi. Na-echetara ndị Alakụba ihe omume Tawaf (nke a na-eme n'oge a na-eme njem dị na Maska mgbe ndị Alakụba na-agbagha ndị Kaʿaba ugboro asaa), Tella gbara Mọ Nsọ ogige (oghere dị n'ime ụlọ ebe a na-akwụ ụgwọ obe) mma ugboro asaa ebe ọ na-ejide ma Akwụkwọ Nsọ na kor'an. Mgbe Tella gụchara Holy Ghost Square, o kwuru okwuchukwu na Yoruba na Bekee wee kọwaa amaokwu ndị dị na Baịbụl, kor'an, na Akwụkwọ Ifeoluwa. Ihe osise dị na Tella kwuru na Akwụkwọ Nsọ ezughị ezu. Iji mezue Bible na kor'an, Tella na-arụ ọrụ na Akwụkwọ Nsọ nke ya, bụ Akwụkwọ Ifeoluwa. Okwuchukwu nke Tella nwere nkuzi omume nke ụmụazụ ya na-akọwa dị ka “okwu mkparịta ụka okpukpe,” na-ezi ha ụzọ ha ga-esi kwụsị nkụda mmụọ ha na otu ha ga-esi nwee ihe ịga nke ọma na ndụ.
Ọrụ Ifeoluwa na-ejedebe ikpe ekpere. N’adịghị ka ndị Alakụba, ndị na-ekpe ekpere ugboro ise n’ụbọchị, ọgbakọ Ifeoluwa na-ekpe ekpere naanị ugboro abụọ n’ụbọchị. Tella kọwara, sị: “A na-achọ ka ndị na-eso m na-ekpe ekpere kwa awa atọ. Mana n’ihi na ndụ m na Lagos siri ike, m na-arịọ arịrịọ n’aha m maka amara Chineke ịnabata ekpere ugboro abụọ n’ụbọchị. Ha enweghị oge ikpe ekpere karịa ugboro abụọ n'ụbọchị, mana ha hụrụ Chineke n'anya oge niile n'obi ha. ” Ekpere mmechi, mgbe nke Ifeoluwa na-agbaso ogwe aka ya nke oma iji mepee uzo mgbaputa, ihe nlere na inye ekele na-esochi. Yiri ọrụ Pentikọstal, akaebe ahụ na-ekwupụta “ọrụ ebube” ndị ụmụazụ Tella nwetara mgbe ha nakweere ịhụnanya nke Chineke na ndụ ha, n'ụgwọ ọgwụgwọ, ịchọta onye ma ọ bụ nwunye, ịmụ nwa, ịchọta ọrụ, ma ọ bụ oke ikuku. Mgbe ọrụ ahụ gasịrị, ọgbakọ dị iche iche zukọrọ ịnata mana, ya bụ, nri a gọziri agọzi.
Na mgbakwunye na ọrụ izu, nke na-ewe ihe dị ka awa atọ, ọgbakọ Ifeoluwa na-ezukọ na Tọzdee ọ bụla iji gaa nnọkọ abalị. Ebumnuche nke vigil bụ ịzụlite mmụọ site na ịnwe mmekọrịta chiri anya na Chineke. Ihe omume ndi ozo kwa izu bu ubochi ndi nlebara anya nke nwanyi na Wenezde, ndi nwanyi n’aru ime na Wenezde na Fraide Mmeri nke Fraide ebe ndi oria na aru aru. N'ehihie Wenezde ọ bụla, ndị okenye ahọpụtara maka ndị ozi a zukọtara ka ha gaa ije na Mụọ Nsọ, oge ekpere atọ. Otu ugboro n’afọ, ha gawara njem “ugwu nke ikike” n’obodo a na-akpọ Tella n’obodo Abeokuta, ebe ha na-ekpe ekpere ma na -ekwusi ike n’egbughị oge ruo ụbọchị atọ. Ememe ọzọ kwa afọ bụ emume ịgba egwu, mgbe Tella (onye Chineke nyere ya iwu ka ọ gbaa ya egwu) na-agba egwu ma na-ewetara ngwa ọrụ okpukpe a na-echekarị n'ụlọ nsọ. Nke a bụ nzukọ dị mkpa ọgbakọ, nke na-enweta ngọzi pụrụ iche n’ụbọchị ahụ. Ememe ndị ọzọ kwa afọ bụ ncheta Tella na ozi ya. A na-eme ememe ụbọchị Sunday ikpeazụ nke Disemba ụbọchị Disemba.
Ndi otu n’ime Ifeoluwa chọrọ ọzụzụ nke mmụọ. Iji mee ka e nwekwuo mmụọ ime mmụọ na ndụ ibi ndụ nke ga-akwalite nkwekọ mmekọrịta, ndị otu ga-edebere iwu iri asatọ na usoro gbasara akparamagwa nke omume (dị ka “onye otu ọ bụla nke eyi ya IfeoluwaUwe agha ekwesịghị ịba mba ma ọ bụ kwuo okwu megide okpukpe ọ bụla ”), uwe ejiji (ụmụ nwanyị Tella kwesịrị ikpuchi isi ha na ndị niile na-eso ụzọ ga-eji ejiji dị mma), na ụdị nri ndị a na-esite na agba ochie na kor'an (ndị otu ga-emerịrị. zere ị alcoholụ mmanya, zere iri azụ azụ na-enweghị oke, dị ka catfish, na anụ ezi; naanị anụ Halal ka anabata. Dịka ọ dị na Islam, ọtụtụ iwu na ụkpụrụ na-ekwusi ike ịdị mkpa nke 'ịdị ọcha' (ụmụ nwanyị ga-anọ n'ụlọ nsọ n'oge nsọ ha gbakwunyere otu ụbọchị ọzọ, emesia ha ga-edo onwe ha nsọ; ndị otu ga-asa ahụ mgbe ha na-enwe mmekọahụ ma pụọ ​​na ha. temple dịkarịa ala awa isii).
N'oge ọzụzụ nke mmụọ ha, ndị otu na-enweta ụgwọ ọrụ dị iche iche nke mmụọ, nke eriri na-acha uhie uhie nọchiri anya ya. Ihe onyonyo dị iche iche bụ ndị otu Ifeoluwa yi bụ ihe ncheta nke koodu akwa a na-akpọ “White Garment Ch ụka” (alasofunfun), ya bụ, Independentlọ Akwụkwọ Africa Independent ma ọ bụ Aladura (Peel 1968). Na mgbakwunye na eriri na-acha uhie uhie, ha na-enwetakwa akụrụngwa nke okpukpe dịka ndị ọrụ ekpere. Ekwenyere na ihe okpukpe a na - echekwa ndị otu pụọ na mwakpo ime mmụọ nke ndị ajọ mmụọ, ma mee ka ha nwee ike ịgwọ ndị ha na - efe ofufe.
Kama ịnata ọzụzụ ime mmụọ, a na-agba ume ndị nwere oke Oke Tude ịzụta Bible na kor'an ma gbaa Tude ụbọchị asaa. Tude, nke pụtara “mgbapụta na-agba ọsọ” na Yoruba, yiri ememe saʿi n'oge njem njem na Mecca mgbe ndị njem na-agba ọsọ ma ọ bụ jiri ọsọ na-aga ugboro asaa n'agbata ugwu Safa na Marwah, na-enyochagharị Hagar maka mmiri tupu Allah ekpughe mmiri nke Zamzam nke ọma. Ndị otu Oke Tude na-ekere òkè na usoro Tude na-agba ọsọ ma ọ bụ na-aga ije ọsọ ọsọ ugboro asaa gburugburu ihe atụ nke Kaʿaba nke nwere olulu mmiri jupụtara na Tude mgbe ọ na-eti “Hallelujah” na “Allah Akbar” (“Chineke dị ukwuu”). [Ihe osise dị n'aka nri] themfọdụ n'ime ha nwere foto nke ndị ikwu ha chọrọ nnapụta na onye ha na-ekpe ekpere maka ha.
Na mgbakwunye na Tude, nke na-ewere ọnọdụ na nke ọ bụla, ndị na-eso ụzọ Oke Tude na-efe ofufe ọgbakọ. Sundaybọchị ụka ọ bụla ha na-ezukọ na elekere asatọ nke ụtụtụ iji sonye na nnọkọ ekpere ndị Alakụba (wuridi) nke imam na-edu. Imam ahụ na-emepe nnọkọ ekpere site n’ikwu “Otuto dịrị Chineke Nna, Ọkpara, na Mmụọ Nsọ,” tupu ọ na-eme dhikr (ncheta Chukwu site n’icheta aha Ya) ma na-agụkwa amaokwu Koran na Akwụkwọ Nsọ. Oge wuridi na-esote oge ekpere Ndị Kraịst nke otu ndị isi ekpere na-agagharị agagharị na-agụpụta usoro ekpere pụrụ iche ma ọ bụ "ebe ekpere" maka ahụike na akụnụba; a na-emechi ya na ọrụ nkwonkwo nke Saka n'onwe ya na-eduzi. Tupu ọrụ nkwonkwo amalite, ndị ukwe na-abụ abụ Ndị Kraịst na nke Alakụba, yana ukwe Oke Tude:
Oh Chukwu, Onye nke Eluigwe
Onye Okike, bia nuru anyi
Ka udo nke Chineke diri Isa (Jisos Kraist),
Na na na Muhammad
Ka udo nke Chineke diri Samsindeen Saka na ndi amuma amara
Chineke nke Udegba mmiri, napụta anyị
Napụta anyi site na oria, uju, na nsogbu di na ndu anyi
Ndị ọrụ egwu ahụ so ndị egwu na-akpọ ụbọ akwara ndị Africa na ndị Western.
Saka mepere okwuchukwu ya site na ihota ya na amaokwu abụọ nke Yoruba na English na Bible na kor'an. Ozi n’ozizi ya na-abụ otu mgbe: Chineke bụ ịhụnanya na Ndị Kraịst na ndị Alakụba si n’otu ebe, ya bụ Abraham ma ọ bụ Ibrahim. Ọrụ a bụ nke Saka duziri na njikọta nke Yoruba na Arabic, na-emechi Ndị Kraịst na ndị Alakụba dịka ịtụgharị aka na ịkpọ isiala.
Na mgbakwunye na ọrụ ofufe, Oke Tude na-ahazi Helọ Akwụkwọ Ọrịa maka ndị "agbagha n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ n'ụzọ ime mmụọ" na Tọzdee ọ bụla. Na obodo Naijiria, ịmụ ụmụ bụ ihe a chọrọ tupu mmadụ na ụmụ nwanyị na-emekọ ihe ọnụ na omume ọma. Nchegbu ụmụ nwanyị banyere ịmụ ụmụ na ịga nke ọma nwere ike iduga ha n'usoro ihe omume ndị a na-enwe kwa izu, nke na-enye ha ụzọ 'ibibi yok nwanyị aga.' A na-egosipụta mgbapụta site na ezi ahụ ike. Mpempe osisi kwụ ọtọ na mgbidi ụlọ ebe a na-anọ efe ofufe [Ihe osise dị n'aka nri] bụ ihe akaebe nke ike ịgwọ ọrịa Saka, onye kwudịrị na ya nwere ike ịgwọ ọrịa HIV / AIDS. Ọgwụ anụ ahụ bụ naanị otu akụkụ nke nnapụta; enwere nkwa nke ịba ọgaranya, ọmụmụ, ịdighi nwa agbọghọ, nnwere onwe pụọ na nsogbu ezinaụlọ, ịgafe ule, na ịnweta ọrụ mgbe ọ na-agba ọsọ Tude ma soro na mmemme Oke Tude.
E wezụga ụmụ nwanyị aga, ndị ntorobịa na-enweghị ọrụ na-aga "Warlọ Akwụkwọ Ekpere nke Oke" nke Oke Tude, ebe ha na-amụ Akwụkwọ Nsọ na kor'an, na Wenezde. N’oge a na-adighi elele diplọma ulo akwukwo nke zuru oke iji kwado mmeghari onodu mmadu na nkwa nke ibi ndu kari kari na Naijiria, mmeghari okpukpe dika Oke Tude n’enye ndi ntorobia obodo mepere emepe ihe ime mmụọ ụdị ohere azụmaahịa na obere mgbazinye ego) iji mee ka ọdịiche dị n’etiti ọchịchọ ha na ohere dị adị. Iji maa atụ, otu nwoke dị afọ iri atọ kwuru na “Daddy GO” (General Onye Nlekọta, ya bụ Saka) nyeere ya aka ịchọta ọrụ ma nweta ala ọ ga-ewuru ụlọ ya. Agbanyeghị na Oke Tude abụghị ihe dị iche, na ụlọ ụka Pentikọstal na otu ndị Alakụba na-enye nkwado ihe yiri ya, ihe na-eme Chrislam pụrụ iche bụ na, site na ịgwakọta ihe ndị sitere na Kraịst na nke Islam, ndị otu kwenyere na a ga-agọzi ha ọtụtụ oge.
Na mgbakwunye na mmemme a na-enwe kwa izu, vigils abalị ebe a na-ete ndị nzukọ ọgbakọ nsọ ugboro abụọ n'ọnwa Oke Tude ma na-adọta nnukwu ndị na-eso ya. Na-abụghị ụbọchị ọmụmụ Saka na ncheta ozi, nke a na-eme ememe na ikesa onyinye n'etiti ndị ogbenye, mmemme ndị ọzọ kwa afọ bụ "Manna nke onye nke Chineke," "Tude Deliverance," "Power in the Ire," na " Ngwá agha nke Chineke. ” Emere ememme ndị a kwa afọ site n'ekpere na mara maramara nke a na-eji ọgbakọ mmanụ, mmiri olulu, na 'ọbara Jizọs' mee ihe ọ drinkụ madeụ a na-egosipụta ike ịgwọ ọrịa).
Echiche dị n'okpuru na Chrislam bụ na ịbụ onye Kristian ma ọ bụ onye Alakụba abụghị naanị iji gosi na ihe gaziere ụwa na ọdịnihu, yabụ Ifeoluwa na Oke Tude na-eso eme emume Ndị Kraịst na ndị Alakụba, na-akwado ikike mmadụ abụọ nwere. Kama ịgụnye usoro ịzọ ọkwa eziokwu, a kwenyere na Kraịst na Alakụba na-anọchite anya ike dị iche iche iji nweta ọnọdụ nnapụta, yabụ enwere ike ijikọ ha ọnụ n'olileanya ọ na-eme ka mmadụ nwekwuo ohere inweta ezigbo ndụ, ya bụ, ndụ nke ezi ahụ ike na akụnụba.
Ndi Ifeoluwa bụ onye na-akpọ Izioluwa, bụ onye ndị na-eso ụzọ ya na-akpọ ya Papa, nke pụtara “nna.” Tella pụtara n’ihu ọha na-eyi iko anwụ na ndị ọrụ ya. Enwere iwu siri ike gbasara mmekọrịta dị n'etiti ndị na-eso ya na Tella. Dịka ọmụmaatụ, ha ga-anọrịrị ebe dị anya mita asaa site na Tella ma ha ga-ahapụ isonye ya n'aka. Kama nke ahụ, ha kelere ma sị ““hụnanya, Udo, Abide.” Iwu a na usoro niile na-agbakwunye n'ọgba aghara Tella. Ndi nwunye ya abuo, “Ndi-ozi Ochie” nyeere aka Tella. Ebe obu na Tella kwenyere n’usoro “50-50,” ma obu nmekorita nwoke na nwoke, ndi nwoke na ndi nwanyi nwere ndi isi na Ifeoluwa, mana, na ntuzi aka nke Mo Nso, umunwanyi aghaghi ibipu temple n’onwunu ha. Tmụ Tella, “Ndị dike Ekpere,” na-arụ ọrụ dịka ndị ọrụ ọkụ na ndị isi ekpere.
Ndị na-eso ụzọ ya na-akpọ Saka [Ihe osise dị n'aka nri] “Onye nke Chineke.” Aha gọọmenti ya bụ “Onye Amụma [Dr.] SO Saka.” Dabere na ike ya “ịhụ” (“ịhụ” bụ okwu a na-eji na ụka Pentikọstal maka amụma), Saka na-ele onwe ya anya dị ka onye amụma nke na-etinye n'etiti Chineke na ndị na-eso ụzọ ya. Ewezuga ibu amuma, ihe ozo nke nzuko Pentikost bu ihe n’abiawanye nye uzo ọgụgụ isi. N’ikwekọ n’usoro a, ndị ụkọchukwu Pentikọstal Naịjirịa na-ejikarị aha “dọkịta,” na-ebipụta akwụkwọ, na mahadum ndị mepere emepe. Dabere na isiokwu ya na ọrụ ya, Saka (onye kwuru na ya agụchaghị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ma kwuo na ya nwere akara mmụta dị nsọ na chi) emetụtala omume a. N'ịbụ ndị ndị ụkọchukwu Pentikọstal, ndị a kpọtụrụ aha na Nigeria dị ka ndị nlekọta nke General (GO's), Saka na-eme dị ka GO nke Oke Tude. I Coomi udi ndi ozuzu aturu nke Pentikost, Saka [Ihe osise di n'aka nri] na-akpo Hummer ma na-eyi uwe oku na uwe ndi Western ma obu uwe ọdịnala.
E jiri ya tụnyere Ifeoluwa, Oke Tude nwere ọgbakọ ọrụ ọfụma. Saka enyere ya aka daka ma diaconess. Ndị na-esote n'usoro bụ ndi ozuzu aturu na ndị nlekọta nlekọta dị elu, ndị na-esote ndị ozi na ndị nlekọta nlekọta nke obere, ndị na-akwado nduzi ndị mmụọ. Na ọkwa dị ala maka ndị isi bụ ndị ndụmọdụ na ndị ọrụ. Ọnọdụ dị na ngalaba nhazi Oke Tude ghe oghe maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị. Ndị ọzọ na -akpọ deacon na deaconess, nke bụ ọkwa zuru oke, ọnọdụ ndị ọzọ dị na nzukọ nke Oke Tude bụ ndị ọrụ afọ ofufo.
Ndị ọzọ na-abụghị isi ụlọ ọrụ dị na Ogudu, Oke Tude nwere obere ngalaba anọ na Lagos, otu dị na Ogun State, na otu na obodo isi obodo nke atọ nke Nigeria.
A na-akwado Ifeoluwa na Oke Tude site na onyinye afọ ofufo site n'aka ndị otu ha. Na mgbakwunye, a na-atụ anya ka ndị otu ahụ kwụọ otu ụzọ n'ụzọ iri kwa ọnwa. Iji nweta ego maka ebumnuche ya, Saka na-etinye aka na azụmaahịa ụlọ na azụmaahịa aka nke abụọ.
Ọ bụ ezie na pragmatism a na-akọwa Chrislam na-ewu ewu na Lagos, ọ na-emekwa ka ọ dị mfe ịkatọ ndị si n'èzí. Dabere na ọtụtụ ndị kwere ekwe na mbụ, Ifeoluwa na Oke Tude bụ 'nkpọrọ' mejupụtara “ndị ekweghị ekwe.” N'echiche ha, n'ihi na ndị Ifeoluwa na Oke Tude agbakwunyere abụghị ndị Kraịst "nwere obi eziokwu" ma ọ bụ ndị Alakụba "na-asọ nsọ" ha abụghị "ihe ọ bụla." Labkpọ ndị otu okpukpe na-ahazighi ya na ọ bụ Iso Christianityzọ Kraịst ma ọ bụ Alakụba bụ 'òtù nzuzo' bụ ụzọ a ma ama nke iji jiri okpukperechi kpọrọ ihe na Nigeria (Hackett 1989). Na mgbakwunye ihe ịma aka ndị a n'ozuzu, Tella na Saka na-agbagha ihe ịma aka ndị ọzọ n'otu n'otu.
Tella chetara otú mbido ozi ya, a kwara ya emo dị ka "onye amụma adịgboroja" n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi. O meghachi omume site n'izere ntụpọ ahụ, ọ bụ ya mere ọ na-ebi ndụ nzuzo ugbu a. Ọ kwenyere na iwu na ụkpụrụ siri ike nke Ifeoluwa na-egbochi ndị na-esochi onwe ha iji obi ha niile na-eje ozi ya. Ndị otu na-agakarị ọrụ kwa izu ruo ọnwa ụfọdụ, mana, mgbe nsogbu mechara bute ha na Ifeoluwa, ha na-alaghachi na ụka mbụ ha, bụ ụlọ alakụba, na / ma ọ bụ ebe okpukperechi ha. N’ihi nke a, enwere nnukwu ọgbụgba n’ime ọgbakọ. N'ihi na Chrislam bụ okpukpe na-abụghị isi, a naghị atụle ịpụ eso ndị mmadụ na ndapụ n'ezi ofufe. Iji mee ka ndị agbakwu ndị ọzọ, Tella abanyela na Facebook. Ọ bụ ezie na nke a emeela ka e nwee ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị na-efe ofufe na-aga ọrụ kwa izu, Tella chọrọ ime ka ọgbakọ ya pere mpe ka o wee nwee ike ịchị ya dị ka “ezinụlọ ime mmụọ.”
Ná mmalite nke ozi ya, ndị odeakụkọ dere akụkọ na-akpali akpali banyere Tella bụ onye meghachiri omume site na ịhapụ ntụpọ na ibi ndụ nzuzo, na-eche "ntụziaka Chineke ka ọ pụta ụwa." N'oge oria ojoo COVID-19, oge ahu erutewo. N’April 25, 2020, Tella wepụtara akwụkwọ akụkọ, na-ekwupụta na mmụọ ozi gbadara n’elu Ugwu Ike izipu ozi Onye ozi Chineke, Ifeoluwa, na-ahazi ụmụazụ na ndị isi okpukpe niile n’ụwa ịgbaso ntuziaka iri, nke ga-akwụsị ọgbaghara ozuru ụwa:
Bido emume ahụ site na iji ụkwụ atọ gaa guzoro ebe a na-efe ofufe. Nke a nwere ike ịnọ n’ihu ebe ịchụàjà.
Jide mma agha gị ọ bụla ma ọ bụ onye ọrụ ikike na-atụgharị aka elu igwe. Ọ bụrụ n’inweghị otu, ịnwere ike ijide Akwụkwọ Nsọ, kor'an ma ọ bụ ebe nkọwa ọzọ dabara na okwukwe gị.
Mgbe ị na-ejide mma agha, guzobe onwe gị site dina ala n’elu obi gị gbadata n’ala (kpọọ isiala).
Mgbe ị nọ n'ọnọdụ ịkpọrọ isi, kwuo ugboro isii “Jehova (Yahweh), wepụrụ anyị ihe ọjọọ a.” Inwere ike ikwu nke a n’asụsụ ị maara nke ọma. Iji maa atụ, “Jehova” ma ọ bụ “Yahweh” nwere ike dochie anya “Allah” ma ọ bụrụ na ị na-asụ Arabik ma ọ bụ Chukwu ọ bụrụ na ị na-asụ Yoruba.
Ugbu a gbanwee ọnọdụ gị (gbue ikpere), yabụ, akụkụ ahụ gị dị elu kwụrụ ọtọ ma kwado ya na ikpere gị abụọ n'ala. Gi kwue ọzọ ugboro isii “Jehova, wepu anyi ihe ojoo a.
Ugbu a, bulie mma agha gị nke ọma, na-agbadokwa elu.
Jiri nwayọ, na mmegharị anọ, jiri ụkwụ ekpe gị gaa n'ihu wee laghachi ụkwụ aka nri. Were ukwu aka nri la azu azu, laghachi azu na ekpe aka ekpe.
Gi kwue ọzọ ugboro isii “Jehova, wepu anyi ihe ojoo a.
Fee Chineke site na ịkpọ isi ala ugboro atọ wee kwuo, “Nsọ” nke mbụ, “Nsọ” nke ugboro abụọ, na oge nke atọ “Onye-nwe-ayi Chineke Pụrụ Ime Ihe Niile”.
Debe onwe gị kwụ ọtọ ma gbasaa aka gị abụọ n’elu ahụ gị ikpe ekpere (dịka ịchọrọ ịnata onyinye) wee sị “Onyenwe anyị kwenyere na ị nụrụ ihe anyị, ọ bụ ọrụ ebube gị ka anyị na-atụ anya. Bịa rụọ ọrụ ebube gị n'ụwa dum. ” Mgbe ahụ kwuo “Haleluja” ugboro asaa.
N'ajụjụ ọnụ, Tella kwetara na iwu na ụkpụrụ siri ike nke Ifeoluwa na-egbochi ndị na-agbaso onwe ha iji obi ha dum na-eje ozi ya. Ndị otu na-agakarị ọrụ kwa izu ruo ọnwa ụfọdụ, mana, mgbe nsogbu mechara bute ha na Ifeoluwa, ha na-alaghachi na ụka mbụ ha, ụlọ alakụba, na / ma ọ bụ okpukperechi ha. N’ihi nke a, enwere nnukwu ịkpa ike n’etiti ọgbakọ. N'ihi na Chrislam bụ okpukpe na-abụghị isi, a naghị atụle ịpụ eso ndị mmadụ na ndapụ n'ezi ofufe. Iji ruo n’oghere niile na-ege ntị zuru ụwa ọnụ, ndị ozi Ifeoluwa emeela mkpokọta weebụsaịtị wee soro Facebook. Agbanyeghị na nke a emeela ka ndị na-eso ụzọ jiri ntakịrị mmụba, Tella chọrọ ime ka ọgbakọ ya pere mpe: “Ndị mmadụ ga na-enwekwu nchegbu (“ nsogbu ”na Pidgin Bekee). Achọghị m ịma banyere ọnụọgụgụ; M na-eche banyere ndị mmadụ na-adị njikere ime uche Chineke. ”
N'adịghị ka Tella, Saka na-achọ mgbasa ozi site na ịnweta mgbasa ozi mgbasa ozi. O nwere atụmatụ ịbawanye ebe ọ na-aga, mana ka ọ nọ na njem azụmahịa na Lọndọn na 2008, a na-eburu ụlọ nzukọ ya iwu nke gọọmentị obodo. Dabere na ọtụtụ ndị ọchịchị steeti, Saka jidere ala nke ndị gọọmentị Lagos Steeti. Ọgbakọ Saka anabataghị nkọwa a; maka mbibi ụlọ nzukọ a bụ ihe ama ama na gọọmentị “na-emegide Chrislam.” Obi abụọ adịghị ala n'ihi na ekenye ala bụ ụzọ dị iche iche eji achịkwa gọọmentị ka ndị otu obere okpukperechi na Nigeria (Hackett 2001).
Ihe ịma aka ọzọ chere Chrislam ihu bụ ọdịnihu nke onye ndu ya. Maka na Tella na Saka kwenyere na ọ bụ Chineke họpụtara ka ha bụrụ ndị isi okpukpe, amabeghị ihe na-eme ngagharị ha mgbe ha nwụrụ.
Dabere na Tella na Saka si kwuo, enwere ike ịkọwa ihe ịma aka ndị ha nwetara n'oge nguzobe Chrislam dịka ohere maka uto ime mmụọ nke ndị ọzọ. N'ịkọchi okwu onye ọsụ ụzọ nke egwu ịgba egwu Bob Marley, Tella kwuru, sị: “Ọ dịghị uru ọ bụla adịghị.”
Foto #1: Akara Ifeoluwa.
Foto # 2: Ndị otu Oke Tude na-ekere òkè n'ememe Tude. Foto nke Akintunde Akinleye sere.
Foto # 3: Onye isi oche Tella na ulo uka Chrislam. Foto nke Marloes Janson sere.
Foto # 4: onye ọrụ Ifeoluwa yi uwe mwụda ọcha nwere eriri acha. Foto nke Marloes Janson sere.
Foto # 5: Ndị otu Oke Tude na-ekere òkè n'ememe Tude. Foto nke Akintunde Akinleye sere.
Onyonyo # 6: Nkịtị dị n’elu mgbidi nke Oke Ofufe ofufe. Foto nke Marloes Janson sere.
Foto # 7: Onye Amụma [Dr.] SO Saka. Foto Akintunde Akinleye sere.
** Ewezuga na ekwuputaghi ya, a na - enweta ihe di na profaịlụ a n’akwụkwọ na - ede akwụkwọ nke onye dere ya Mgbakọ okpukpe na Lagos (Mahadum Cambridge Press, maka International African Institute), na edemede “Unitydị n'otu site na Ndịrịta iche: Ọmụmụ Chrislam na Lagos.” Africa: Journal of International African Institute (2016, Vol. 86 Nke 4): 646-72. Ihe omuma a dabere na nyocha nke akparamagwa nke onye edemede dere ya na Lagos n’agbata July 21 ruo Ọktọba 3, 2010, Ọktọba 20 na Disemba 18, 2011, na Machị 6 na Mee 15, 2017.
Hackett, Rosalind. 2001. "Ndị Amụma, 'Ndị Amụma ,gha,' na African State: Ihe Mgbapụta nke Nnwere Onwe Okpukpe na Ọgba aghara". Nova Religio: Journal of Alternative and Religious Emergencies 4: 187-212.
Hackett, Rosalind. 1989. Okpukpe na Calabar: Ndụ okpukpe na akụkọ ihe mere eme nke obodo Nigeria. Berlin: Mouton de Gruyter.
Nkwupụta mmepe mmadụ. 2006. New York: UNDP.
Laitin, David. N'afọ 1986. Njikota onu na Omenala: Ndọrọ Ndọrọ Ọchịchị na Mgbanwe okpukpe n’etiti ndị Yoruba. Chicago: University nke Chicago Pịa.
Larkin, Brian na Birgit Meyer. 2006. "Pentikọstism, Alakụba na Ọdịnala: Mmegharị Okpukpe Ọhụụ na West Africa". Pp. 286–312 na Gburugburu na West Africa History, nke Emmanuel K. Akyeampong deziri. Oxford: James Currey.
Peel, JDY 1968. Aladura: Otu okpukperechi n’etiti ndi Yoruba. London: Oxford University Press.